प्रजित केसी ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गर्न जाने, गोरेले डीआईजी बनाइदिने !::Online News Portal from State No. 4
प्रजित केसी ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गर्न जाने, गोरेले डीआईजी बनाइदिने !
साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरण
काठमाडौं, २७ जेठ – माघ ९ गते काठमाडौं भित्रिएपछि गायब भएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्या प्रकरण अझै सेलाउन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले बनाएको विशेष अनुसन्धान टोलीको म्याद जेठ मसान्तसम्म भए पनि थप गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । समितिले जारी राखेको अनुसन्धानमा एकपछि अर्को विषय थप हुँदै गएको छ । तस्करी र उनीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रहरीले सबै घटनाको अडियो प्रमाणस्वरुप राखेको पाइएको छ । अडियोमा सनम शाक्यको हत्यापछि अपराध महाशाखाका डीएसपी प्रजित केसीसहितको टोली तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरेसहितको टोलीलाई ‘नक्कली इन्काउन्टर’ गर्न गएको पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो छ, एसएसपी दिवेश लोहनी र डीएसपी प्रजित केसीबीचको कुराकानी :
उता डीएसपी केसी र गोरेबीचको कुराकानीको अडियोमा गोरेले आफूलाई सहयोग गरेमा डीआईजी बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् । गोरेले भनेका छन्– ल म तपाईँलाई डीआईजी बनाइदिउँला, सिद्दियो !’
डीएसपी केसी र गोरेबीच भएको टेलिफोन वार्ता :
यी मात्रै होइन, अन्य अडियो पनि सार्वजनिक भएका छन् । डीएसपी केसीसँग गोरेकी श्रीमतिले गरेको कुराकानी होस् वा अन्य । सबै अडियो सुरक्षित छन् । त्यसबाहेक एसएसपी लोहनीले बमबहादुर भण्डारीसँग गरेको कुराकानी यसअघि नै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो ।
‘गोरे’ ले आफ्ना पूर्व लेखा सहयोगी सनम शाक्यलाई निर्मम यातना दिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यही भिडियो विशेष अनुसन्धान टोलीका लागि घटनाको जरोसम्म पुग्ने र तथ्य पत्ता लगाउने गतिलो आधार बनेको स्रोत बताउँछ । गत माघ ९ गते युएइबाट नेपाल भित्रिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि गोरे र उनको समूहले सुन लुकाएको आरोपमा सनमसहित अन्य केहीलाई यातना दिएका थिए । यातनाकै कारण फागुन १८ गते सनमको मृत्यु भएको थियो ।
भिडियोमा चूडामणि उप्रती ‘गोरे’ आफैँ यातना दिन आदेश दिइरहेका छन् भने आफैँ पनि करेन्ट लगाइरहेका थिए । गोरेका मुख्य सहयोगी राम तिवारी र गोरेबीचको अडियो र डिएसपी केसी र गोरेबीच भएका कुराकानी सबै चर्चामा छन् । योसँगै सई बालकृष्ण सञ्जेल र गोरेबीचको कुराकानी अडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
यतिधेरै अडियो र भिडियो कसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् ? किन सबै अडियो र भिडियो सुरक्षित राखिएको थियो त ? गोरेको भिडियोपछि एकपछि अर्को अडियो कल सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक भएका अडियोले नै घटनालाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिएको छ । टोलीका एक सदस्यले भन्छन्, “अपराधिक कार्य गर्न उद्यत सबैलाई आफु पछि फसिने डर देखियो । त्यसैले आफु फसे अरुलाई पनि फसाउने नियतले अडियो बनेको देखिन्छ ।”
उनका अनुसार प्रजित केसीले समिति र अदालतमा दिएको बयानमा प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड हुने हुँदा सोहीअनुसार चलेको दाबी पेस गरेका थिए । उनले प्रमाणस्वरुप आफ्नो मोवाइलमा रहेका अडियो दिएको स्रोतको दाबी छ । “अहिलेसम्म पक्राउ परेका र फरारको सूचीमा रहेका धेरैजना भरियाको काम र सहयोग गर्ने देखियो,” समिति स्रोत भन्छ, “सुन हराइसकेपछि खोजबिन जारी राखेको प्रमाण लगानीकर्तालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि धेरै प्रमाण सुरक्षित राख्ने गरेको देखिन्छ ।”
सार्वजनिक भएका सबैजसो अडियो ल्याव परीक्षणबाट प्रमाणित गरिएको समिति स्रोत बताउँछ । “आफु फस्ने खतरा बढेपछि अभियुक्तहरुले नै अडियो सार्वजनिक गरेको पनि देखियो,” टोलीका सदस्य भन्छन् । अडियो रेकर्ड दिवेश लोहनी, गोरे, प्रजित केसी, बालकृष्ण सन्जेल लगायतले गरेको देखिन्छ । लोहनीले त निमित्त एआइजी भण्डारीसँग अनुमति माग्दै गरेको कल नै रेकर्ड गरेका छन् । तर पछि लोहनीसँगको कुराकानी डीएसपी प्रतिज केसीले पनि गरेका छन् । सबै रेकर्डहरुबाट उनीहरुको नियतमा खोट देखिएको समिति स्रोत बताउँछ ।
अडियोहरुबाट आफुहरुलाई अनुसन्धान गर्न सहज भएको टोलीका सदस्य बताउँछन् । अनुसन्धान टोलीले पक्राउ परेका सबैजसो अभियुक्तहरुसँगको बयानको भिडियो नै बनाएको स्रोत बताउँछ । अनुसन्धान टोलीका सदस्य भन्छन्–‘अडियो भिडियोले नै धेरैलाई डुबायो ।’
गोरेले किन बनाए भिडियो ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका मुख्य न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार गोरेलगायतको समूहले हरेक घटनाहरुको भिडियो बनाउने गरेको पाइएको छ । सुन हराएपछि आत्तिएका गोरेले सुनमा लगानी गर्नेहरुलाई आफूले सुन खोज्न मेहनत गरेको भनेर देखाउन पनि यो भिडियो बनाएका थिए । सुनमा लगानी गर्नेहरुलाई दैनिक ‘भिडियो’ पठाइन्थ्यो । गोरेको समुहको त्यो दैनिक कार्यप्रगति विवरणजस्तै थियो । अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा उक्त सुनमा एमके अग्रवालले लगानी गरेको खुलेको छ । अग्रवालको खोजी जारी राखे पनि उनी अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन् । उनको निवासमा शुक्रबार समितिले छापा मारेर केही कागजात र सरसामान बरामद गरेको छ । बाह्रखरी